Horey isku diiwaangeli
Nidaamka maalgashiga maaliyadeed ee cusub
Trading Battle Net .com waa beel ganacsi oo ka ganacsata loom-yaqaan, cusboonaysiinta, iyo wararka.
Tag wakhtiga faa'iidada degdegga ah
Waqti xawaare degdeg ah
Waqtiga dagaalka, faa'iidada, qaddarka khasaaraha ayaa la dooran karaa
Ugu yaraan 30 daqiiqo, faa iidada 50% waa la xaqiijin karaa
Nidaam otomaatig ah oo degdeg ah iyo ka bixitaan lacag la'aan ah
Tag si aad u maamusho maalka hantida
Sugida maareynta hantida
Tiknoolajiyadda Blockchain, maaraynta taariikhda macaamil ganacsi
Nidaamka amniga sarrifka weyn
Shaxda OPEN API Chart
U tag qofkasta, jiil faa'ido badan
Jiil faa’iido badan u leh qof walba
Xulashada halista tooska ah
Magaalo yar, soo laabasho sare suurtagal
Raasamaal sare, maareynta khatarta iyo faa'iidooyinka xasilloon
Tag nidaamka lagu maroojiyo Cadaalad
Nidaam tillaabo caddaalad ah
Dhammaantood waxay ku bilowdaan isla xaalad isku mid ah
Tartanka Xirfadaha Shaqsiyeed ee VS
Nidaamka darajooyinka tikniyoolajiyada 'Blockchain'
Waqtiga maalgashiga 30 daqiiqo! Soo-bixinta waa labanlaabmay!
Nidaam ganacsi oo caddaalad ah iyo qiimeyn iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyada 'blockchain technology', daahirnimo shaqsiyadeed oo saafi ah iyo isdhaafsiga maalgashiga ee shaqsiga
Soo laabashada sare
Hal abuurka dhaqaalaha
Jawi ganacsi oo fiican
Iyada oo leh interface ku habboon iyo mashiinka soomida waxqabadka sare
Ganacsi dhakhso iyo sax ah
Nidaamka ganacsiga 24-ka saac
Ku habboon PC iyo waliba moobiil,
Ganacsi fudud oo ku habboon wakhti kasta, meel kasta
30 daqiiqo macaamil ganacsi
Waqti dhimis si looga faa'iideysto
Ugu badnaan soo laabashada
Faa'iido u leh suuqa berada
Xulato saamiga khasaarahaaga
Faa'iido badan iyo abaalmarino
Hay'ad iyo awood la’aan
Shakhsiyaadka vs tartan maal gashiga saafiga ah
Naqshad dhab ah oo firfircoon sida ciyaarta
Ganacsiga Goobaha Dagaal
Madal maalgalin oo cusub oo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda loo yaqaan 'blockchain technology'
Ciyaar u eg ciyaar
Xisaabta Facebook ee ciyaarta-u eg ganacsiga
Xisaabta akoonka Twitter ee ganacsiga u eg ciyaarta
Koontada akoonada ganacsiga u egtahay ciyaar
Koontada xisaabinta ee ganacsiga u eg ciyaarta
Koontada Linkedin ee ganacsiga u eg ciyaarta
Waxaan qorsheyneynaa inaan siino isticmaaleyaasha dareenka ay ku ciyaarayaan ciyaarta istiraatiijiyadda ciyaarta. Mustaqbalka, calaamado kala duwan ayaa loo adeegsan karaa iibsashada iyo adeegsiga howlo waxtar u leh ganacsiga. የሰማይ አካላት
Ka faa’iideysiga furnaanta API furan ee isweydaarsiga waaweyn
Koontada Facebook ee OPEN API
Koontada Twitter-ka ee OPEN API
Koontada koontada OPEN API
Koontada xisaabta ee OPEN API
Xisaabta Linkedin ee OPEN API
Si ka duwan adeegyada maalgashiga dabiiciga ah ee caadiga ah, adeegga dagaalka ganacsiga ayaa u adeegsanaya isweydaarsiga dhabta ah ee cryptocurrency's Open API inuu adeegsado xigashooyinka waqtiga dhabta ah iyo dareeraha sida ay tahay.
Xeerarka Ciyaaraha Bilaashka ah
Xeerarka dagaalka ee uu go'aamiyo adeegsadaha
Xisaabta Facebook ee xeerarka ciyaarta bilaashka ah
Koontada Twitter-ka ee xeerarka ciyaarta bilaashka ah
Ku xooji koontada xisaabta xeerarka ciyaarta bilaashka ah
Xisaabtir xisaabta xeerarka ciyaarta bilaashka ah
Xiritaanka koontada Linkedin ee xeerarka ciyaarta bilaashka ah
Dhamaan shuruucda dagaalka ee adeegga Ganacsiga Ganacsiga waxaa go'aamiya adeegsadaha. Isticmaalaha ayaa go'aan ka gaaraya xeerarka ka soo baxa xeerarka ay shirkaddu dejisay. Waxaan ku samaynaa dagaallada ganacsiga ka dhex dhaca isticmaaleyaasha iyadoo la raacayo qawaaniinta aan go'aansanay. Ma jiro wax is khilaafsan oo adeegsadaha ah natiijooyinka iyo qaybsanaanta.
Adeegsiga walxaha gudaha ku jira
Koontada Facebook ee calaamadaha TBet
Koontada Twitter-ka ee calaamadaha TBet
Koontada akoonkeeda TBet ku xoojiso
Koontada xisaabta ee korantada
Koontada Linkedin ee calaamadaha TBet
Calaamadaha kaladuwan ayaa loo baahan karaa si loo abuuro qol dagaal, iyo in abaalmarin gaar ah la siiyo xubnaha abuuraya qolka dagaalka. Kulamo yar-yar oo noocyo kala duwan ah ayaa laga bilaabi doonaa adeegga ka-qeybgalka ciyaarta yar-yar. Ciyaarta yar-yar waa ciyaar macquul ah waxayna adeegsan doontaa calaamado kala duwan si ay uga qeybqaataan.
Nidaam lagu kalsoonaan karo iyo tikniyoolajiyad
Dhacdooyinka xubinnimada hormarsan (30 tokons
Codso xubin ahaanta
Ganacsiga Macluumaadka Dagaal
Ganacsiga Dagaalkii ugu Dambeeyay, Aqoon-Yahan, Warar, Bulshada Ganacsato
In ka badan 1 kun oo dagaallo ganacsi ah oo horay loo sii diiwaangeliyay
Nidaamkeenna dagaalka ayaa ka sare maray 6 ka-hor-joogayaasha caalamiga ah hadda 10 maalmood ka dib markii lagu dhawaaqay munaasabaddii is-diiwaangelinta isdiiwaangalinta 30-ka Juun. Mar labaad waad ku mahadsan tahay xiisahaaga iyo jacaylkaaga. Waxaan ku dadaalaynaa sida ugu wanaagsan oo aan kuugu tusin karno adeeg badbaado leh oo ka wanaagsan sidii aad u bixin lahayd danahaaga. Mar labaad waad mahadsan tihiin Dhamaan ganacsatada madadaalada dagaalka.
Dulmarka Token Token
Dulmarka Token Token Toket Salaan, kani waa Trading Battle. Tartanka Adeegga Dagaalku waa goob loogu talo galay adeegsadayaasha inay dejiyaan xeerarka dagaalka (waqtiga, abaalmarinta, iwm.) Oo ay ka ganacsadaan calaamado kala duwan isweydaarsiga waaweyn si ay u qabtaan dagaallo ayna u go'aamiyaan darajooyin si ay ugu guuleystaan ​​abaalmarinno. Maanta, waxaan jeclaan lahaa inaan sharraxo calaamadaha TBET. Tilmaanta TBET Token ee TBET Token waa sumad loo yaqaan 'cryptocurrency' oo u shaqeyn doonta sidii lacag lagu fulin lahaa mashaariicda iyo adeegsiga adeegyada dagaalka ganacsiga, iyo adeegyada ka dhex dagaallama ganacsiga. Hordhac dheeraad ah oo ku saabsan tusmada Toket Token[...]
Isticmaalka calaamadaha TBET
Isticmaalka astaamaha 'TBET' calaamadaha TBET waxaa loo isticmaalaa in lagu isticmaalo howlo kala duwan iyo adeegyo lagu bixiyo dagaallada ganacsiga. Intaa waxa u dheer, shaqada loo adeegsado calaamadaha TBET si joogto ah ayaa loo horumarin doonaa. Sicir-dhimista Qiimaha Dagaalka Ganacsiga Darajada adeegga ganacsigu way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran heerka celceliska 0.01%. Intaa waxaa sii dheer, si macaash looga sameeyo isbeddelada suuqyada hoose, guddiyada hoose waxay leeyihiin saameyn weyn. Kaqeyb galayaasha dagaalka ayaa ah Hordhac Adeegsiga Token dheeraad ah[...]
Nidaamka ganacsi ee Blockchain
Nidaamka Ganacsi ee Blockchain Waxaan si firfircoon u adeegsan doonnaa tikniyoolajiyada blockchain si aan kor ugu qaadno hufnaanta dagaallada ganacsiga. Si loo bixiyo adeegyadan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo nidaam loo yaqaan 'blockchain system' oo awood u leh caddeynta macaamilidda waqtiga-dhabta ah. Waxaan u isticmaalnaa xalalka blockchain shirkadaha ka yimid tikniyoolajiyada la xaqiijiyay iyo amniga sare si loo horumariyo nidaamka. Hordhac Nidaam Ganacsi oo Dheeraad ah[...]
Waa maxay sababta aad ugu dagaallanto ganacsiga ganacsiga blockchain
Waxaan khibrad u leenahay socodsiinta adeegyada maalgashiga jilitaanka ee cryptocurrency ka hor intaanan u diyaarin mashruuca dagaalka ganacsiga. Waxaan ku xaqiijinay baahiyo badan oo adeegsadayaasha xagga adeega. Waxaa ka mid ah, weydiimaha ugu badan ee adeegsadayaasha iyo caqabadda adeegga ayaa ahayd xaqiijinta hufnaan la'aanta iyo qiimeynta '. Waxaan go'aansanay inaan ka faa'iideysanno tikniyoolajiyada caqliga leh ee 'KwonTrect' ee blockchain si aan u sii ballaarino adeegyadeena la xaqiijiyay. Intaa waxa u dheer, in badan oo ka mid ah adeegyada jira ee ay ahayd in ay maareeyaan hawl wadeennada laftooda. Hordhac Sababao Dheeraad ah oo Loogu Dhisayo Dagaalada Tartanka ee 'Blockchain'[...]
Jiil faa’iido weyn leh xitaa oo leh maalgalin yar
〉 Bixinta adeegyo si macaash looga sameeyo xirfadaha ganacsiga, ee ma ahan qadar yar oo ah maal-soo-saar, xitaa maal-gashiyo yar-yar. Isweydaarsiga jira, 0.1ETH waa la maalgashan karaa si loo gaaro wax soo saar 100%, laakiin kaliya 0.2ETH ayaa la heli karaa. Si kastaba ha noqotee, adeeggayaga dagaalka ganacsiga, waxaad ku maalgelin kartaa 0.1 ETH waxaadna kasban kartaa 1.0 ETH hal dagaal. Service Adeeg firfircoon oo ku kasbanaya faa'iidooyinka hal mar dagaal ka yimaada maalgashiga oo kaliya sugaya kororka maalgashiga kadib Hordhac Abuur faa iido macno leh oo leh maalgelin yar[...]
Ka Ganacsiga Himilada Adeegga Dagaal
Waxay hiigsaneysaa inay bixiso adeeg dagaal oo ganacsi oo ku gaari kara soo laabasho weyn maalgashiga xitaa caasimada yar. Adeegga ganacsiga ee loo yaqaan 'Cryptocurrency service' wuxuu xalliyaa dhibaatada dareeraha macaamilka isagoo dhisaya adeegsiga adoo adeegsanaya Open API ee isweydaarsiga cryptocurrency oo leh cabitaan badan. Adeeggeenna, awoodda ganacsi ee adeegsadaha ayaa ah tan ugu muhiimsan. Dhamaan adeegsadayaashu waxay galaan qolka dagaalka ee ay rabaan waxayna u tartamayaan inay ku ganacsadaan isla hantida ay ka shaqeeyaan. Hordhac Himilo Adeeg Ganacsi oo Ganacsi Dheraad ah[...]
Sida loo garaaco dagaalada fudud & cayaaraha fudud Dhibaatooyinka qamaarka
Beesha Q. Sida loo khayaamo dagaal fudud & ciyaar yar-yar ayaa dhibaato dambe ku noqon kara khamaarka ?? Maamulaha: Waxaan dib-u-eegis ku sameynay arrimaha sharciga waxyaabaha ku jira baaritaanka, iyo FX iyo cayaaraha kale ee la midka ah waa kuwa dhib badan maxaa yeelay waxaa lagu abaalmariyey natiijada fursadda. . Beesha Q. Haddii aad tahay qof ganacsi wanaagsan, waad isticmaali kartaa marinka Soo bandhigid intaa ka badan Sida loo khayaamo dagaal fudud & ciyaar yar-yar Dhibaatada khamaarka[...]
Ma jiraan wax isweydaarsiga oo qorsheynaya in la qoro sannadka 2020?
Ma jiraan wax isweydaarsiga oo qorsheynaya in la qoro sannadka 2020? Maamulaha: Waxaan ku bixinaa adeegyada bot isweydaarsiga badan ee cryptocurrency waxaanan la xiriirnaa saraakiisha sarrifka. Si kastaba ha noqotee, sida aan u diyaarinay wakhti dheer, waxaan isku diyaarineynaa liiska ugu horeeya ee ku saabsan is weydaarsiga weyn, sidaa darteed haddii aad rabto inaad hubiso liiska mustaqbalka, fadlan imaan qolka Telegram-ka si aad u aragto ogeysiiska waqtiga-dhabta ah. Mashruucanna waxaa loogu talagalay adeegga caalamiga halkii laga adeegsan lahaa adeegga Kuuriya. Hordhac Dheeri Ma jiraan wax isweydaarsi ah oo la qorsheynayo in la qoro sanadka 2020?[...]
Miyaan ka qaybqaadan karaa tartamo badan isla waqti isku mid ah?
Q. Miyaan abuuri karaa qolal badan isla markaana kaqaybqaadi karaa tartamo badan isla waqti isku mid ah? Maamulaha: Qof kasta oo adeegsada wuxuu abuuri karaa qolal dagaal oo dhowr ah sidoo kale wuxuu kaloo kaqeyb qaadan karaa qolalka dagaalka. Qorshahan hada socda wuxuu qorsheynayaa ugu badnaan 10 kaqeybgale. Waxaan qorsheyneynaa inaan hagaajino baaxadda ka qeybqaadashada badan iyadoo aan fiirineyno baahiyaha isticmaala iyo xaaladaha ka qeybqaadashada badan. Q&A qaybta Beesha Q. Haddii aad eegto warqadda cad, Hordhac Dheeraad ah Ma ka qaybqaadan karaa tartamada badan waqti isku mid ah?[...]
Kaliya dad badan oo adeegsadeyaal ah ayaa awoodi doona inay la dagaallamaan ganacsiga
Kaliya tiro badan oo adeegsadayaal ah ayaa awoodi doona inay la dagaallamaan ganacsiga Q. Waa maxay faa'iidooyinka ay adeegsadayaashu heli karaan? Intaa waxaa sii dheer, waxay umuuqataa inay jiri doonaan dad badan oo adeegsadayaal ah oo awoodo inay sameyaan dagaalada ganacsiga. Maamulaha: Waqtigaan, su'aalo fara badan ayaa la helay iyada oo lala kaashanayo howlaha PR iyo suuq geynta Kuuriyada iyo dibedda. Waxaan qorsheyneynaa inaan si firfircoon ula shaqeyno suuqeyaha oo aan xiriir la sameyno, isla markaana aan abaabulno sawirro madal ah anaga oo marti-gelinna tartamada ganacsiga ee sida joogtada ah u maamusha badeecooyinka. Soo bandhigista isticmaaleyaal badan si ay ula dagaallamaan ganacsi ay la galaan isticmaaleyaal badan[...]
Soo iibso oo isticmaal calaamadaha TBET-ka iyo alaabada la dhimay
Q. Loolanka ganacsiga, u deji waqtiga, abaalmarinta, iwm, iyo iibsashada alaabo leh qiima dhimis leh calaamadaha TBET.Tayadani sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro qolalka dagaalka, maxaase kaga duwanaan kara adeegyada maalgashiga jilashada ee jira? Maxaad u maleyneysaa inay tahay sababta loogu isticmaalo adeegga dagaalka ganacsiga iyo faa'iidooyinka (soo laabashada, iwm) ee aad hesho !? Maamulaha: Waxaan fahansanahay in ujeeddada iyo faa'iidooyinka loo adeegsanayo maalgashiga dalwaddu ay kala duwan yihiin. Faa'iidada ugu weyn ee loo adeegsado dagaalka ganacsiga waa ka ganacsiga hantida hantida dijitaalka ah Soo bandhig tigidhada dheeraadka ah ee loo yaqaan 'TBET Tokens', waxyaabo la dhimay oo loo adeegsaday iibsashada[...]
Ka adeegashada adeegga dagaalka qaab lacag ku sameysa xirfado ganacsi oo saafi ah
Q. Haddii aad aqriso warqadda cad, calaamadaha TBET waxaa la sheegaa inay sare u qaadayaan faa'iidooyinka iyagoo adeegsanaya adeegyada dagaalka iyadoo laga faa'ideysanayo xirfadaha ganacsi ee saafiga ah, oo aan lagu kicin lacag awood dhaqaale. Waxaad kuheleysaa 0.1 ETH gudaha, laakiin tusaha TBET wuxuu leeyahay xitaa hadaad maal gasho isla 100 ETH, waxaad kasban kartaa 2 ETH hal dagaal. Dusha sare, waxay dareemeysaa inay lamid tahay ganacsiga margin, laakiin farqiga u dhexeeya ganacsiga margin iyo adeegga ganacsiga ee calaamadaha TBET Soo bandhigid adeeg ganacsi oo dheraad ah qaab lacag lagu kasbado xirfado ganacsi oo saafi ah[...]
Abuuritaanka qolka dagaalka ayaa looga baahan yahay dagaalka ganacsiga
Jawaab Hadday haa tahay, waa maxay tirada ugu yar ee dadku u baahan yihiin maxayna yihiin qaababka lagu horumarin karo qolkayga dagaal? Maamulaha: Tirada ugu yar ee dadku bilaabi karaan dagaalka, oo uu ku jiro hogaamiyaha Hordhac Dagaal Ganacsi Dheeraad ah ayaa u baahan abuurida qol dagaal.[...]
Waa maxay dariiqa joogtada ah ee loo adeegsado calaamadaha TBET?
Q. Marka laga eego aragtida maalgashadayaasha, waxaan jeclaan lahaa mashruucu inuu ku kordhiyo qiimahiisa maalgashiga iyada oo loo marayo horumar joogto ah. Marka laga hadlayo dagaalada ganacsiga, waxaan isweydiiyaa inay tahay dhacdo gaaban. Waa maxay xawliga joogtada ahi? Dhacdooyinka la xiriira ganacsiga waxaa lagu qabtaa isweydaarsiyo kala duwan waqti ka waqti. Qadaadiicda ay soo saareen isdhaafsiga ayaa sidoo kale loo bixiyaa magdhow ahaan. Muxuu kaga duwan yahay taas? Maamulaha: Ilaa iyo hadda, seddex adeeg ayaa loo hayaa isticmaalka tigidhada TBET-ga ee masraxa. Qaabka uu qof walba si joogto ah u cunayo TBET-ka Hordhac Dheeri ah Waa maxay sii wadida astaamaha TBET?[...]
Sidee loo isticmaalaa calaamadaha TBET?
Q. Sidee loo isticmaalaa calaamadaha TBET? Waa maxay farqiga u dhexeeya madal jira? Maamulaha: TBET token waa sumad loo yaqaan 'cryptocurrency' oo mas'uul ka noqon doonta shaqada lacagta ee fulinta mashruuca iyo adeegsiga adeegga dagaalka ganacsiga, iyo adeegsiga adeegga dagaalka ganacsiga waxaa lagu sameeyaa kaliya astaamaha TBET. Calaamadaha TBET waxaa loo isticmaalaa markii ugu horeysay, qiimo dhimis lagu sameeyo khidmadaha dagaalka. Darajaynta adeegga dagaalka ganacsiga way kala duwanaan kartaa xitaa haddii soosaarku uu yahay 0.01%. Sidoo kale xigashooyin hoose Hordhac intaa ka badan Sidee loo isticmaalaa calaamadaha TBET?[...]
Muxuu yahay Qalabka Ganacsiga Ganacsiga?
Q. Waa maxay Plading Battle Platform? Waxay umuuqataa meel aan aqoon, laakiin fadlan si faahfaahsan u sharax. Maamulaha: Ganacsiga Ganacsiga waa madal ganacsi oo isku daraya waxyaabaha'Battle 'iyo ka ganacsiga hantida milkiyeyaasha. Isticmaalayaashu waxay ka qaybgalaan qolka dagaalka iyagoo leh lacag kaqeybgal la mid ah (ETH) isla markaana ka ganacsada isla waqtigaas iyo maalgalinta, ka dibna 50% ugu sareeya ee adeegsadayaasha soo laabashada sare leh la wadaagaan khidmadda ka qeybgalka (ETH). Nidaamka dagaalka noocan ah, adeegsadayaashu way ka badan yihiin kuwa ka ganacsanaya iyagoo adeegsanaya isweydaarsiga jira. Hordhac dheeraad ah Muxuu yahay Nidaamka Dagaal Ganacsiga?[...]
Ganacsiga Hordhaca ah ee Mashruuca Dagaal
Q. Fadlan si kooban u baro naftaada iyo mashruucaaga. Maamule: waa salaam. Tani waa Suwon Kim, Maamulaha Guud ee Mashruuca Ganacsiga. Si kooban aan u soo bandhigo nafsadeyda, anigu waxaan ahay madaxa fulinta ee AviBot, oo galay adeegga ganacsiga ee otomaatiga u ah Bithumb, oo aan ku hormariyey tikniyoolajiyada API ee ay bixiso is-dhaafsiga si aan u soo bandhigo mashruuca hadda jira. Waxaa sharaf ii ah in aan karti u yeesho in aan soo bandhigo mashruuca ugu horreeya ee laga helo Shrimp Fishing Boat. Mashruucayagu kaliya maahan iibinta iyo iibsashada suuqa cryptocurrency, wuxuu ku saabsan yahay ka ganacsiga hantida hantida dijitaalka ah. Horudhac Mashruuc Ganacsi badan oo Ganacsi Hordhac[...]
Aqoonsiga Katok: 24MEX
1: 1 ersti
Zerif Lite soo saare: ThemeIsle